Taorian’ny Fahafatesan’ilay Pelaka Mpanakanto Malaza, Mitaky Ny Fitovian-jo Amin’ny Mariazy Ny Vondrona LGBT ao Taiwan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2016 16:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, 日本語, English
Nifindra tao Taiwan tamin'ny taona 1979 i Jacques Camille Picoux, teraka tamin'ny 1948. Tamin'ny 17 Oktobra 2016, herintaona taorian'ny nahafatesan'ny sakaizany, hita faty tao ivelan'ny tranony tao Taipei izy. Namoy ny ainy izy rehefa nianjera avy eny amin'ny farany ambony rihan'ny tranobe misy rihana 10, araka ny filazan'ny polisy ao Taipei. Tsy misy ny fiahiahiana vono olona sy lalao ratsy, hoy ny polisy, satria tsy nahitana famantarana ady na fifandirana tao amin'ny efitranony na koa tao amin'ny tafon-trano.
Mpanakanto fanta-daza ao Taiwan i Jacques. Rehefa nisotro ronono taorian'ny fampianarana teny Frantsay tamin'ny taona 2005, nanohy ny zavakanto izy ary nanatontosa fampirantiana irery tamin'ny 2012. Nandray anjara lehibe tamin'ny sarimihetsika nahazo loka, antsoina hoe “The Assassin (Ny Mpamono olona)” (2015) ihany koa izy.
Yen-Jong Lee, mpianatr'i Jacques taloha nandefa ny sarin'i Jacques sy ny sakaizany ary nanoratra ny tantaran'izy ireo tao amin'ny Facebook-ny tamin'ny Oktobra 2015, taorian'ny nahafatesan'ny sakaizan'i Jacques.
Natolotra tao amin'ny Antenimiera Yuan tamin'ny 2012 ny volavolan-dalàna ary nodinihana voalohany tamin'ny 2013. Na izany aza, taorian'ny hetsika goavana manohitra ny fanambadian'ny olona mitovy taovam-pananahana tamin'ny 2014, nahantona ny volavolan-dalàna. Satria mpanohana mafy ny zon'ny LGBT ny filoha ankehitriny ao Taiwan, Tsai Ing-Wen, diso fanantenana ny LGBT fa nosakanan’ny fitondran'i Tsai ny lalàna.
Raha vao nandre ny vaovao momba ny fahafatesan'i Jacques, notsikerain’i Hsin-Yi Chu, izay pelaka ihany koa ny mpivaro-bava karamaina hiaro ny zon'ny LGBT ary nandrisika izy ny hanaovana hetsika fanohanana mivaingana kokoa:
Manomana ezaka faramparany hanafainganana ny lalàna amin'ny alalan'ny diabem-pireharehana hotontosaina ao Taiwan amin'ny 29 Oktobra ihany koa ny vondrom-piarahamonina LGBT. Ny lohahevitra amin'ny diabe amin'ity taona ity dia “Vakio ny sarontavan'ny hatsaram-panahy mihatsaravelatsihy“:
Ny anton'ny famonoan-tena voalohany dia fahakiviana tsy voatsabo. Azo sitranina ny fahakiviana ary azo sorohina ny famonoan-tena. Afaka mahazo fanampiana fanohanana manokana an-telefonina ianao sy ireo manana olana ara-pihetseham-po. Tsidiho ny Befrienders.org raha te hahazo fanampiana amin'ny antso an-telefonina mikasika ny fisorohana ny famonoan-tena ao amin'ny firenenao.